नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिबलमा १४ देशका ९ फिल्म « News of Nepal
नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिबलमा १४ देशका ९ फिल्म
छैटौं नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिबल२०१७ मा १४ देशका ९ फिल्म देखाइने भएको छ। भोलि सोमबारबाट ४ असोजसम्म राजधानीमा तयारी सम्पन्न भएको आयोजक संस्था कलेज अफ मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नालिज्मकी प्रिन्सिपल एवं यस फेस्टिबलकी निर्देशक डा. मञ्जु मिश्रले जानकारी गराइन्।
कमलपोखरीस्थित रसियन कल्चरल सेन्टरमा आयोजना हुने महोत्सव बारे राजधानीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा महोत्सव निर्देशक मिश्रले भनिन्– ‘महोत्सवको तयारी पूरा भएको छ। महोत्सवमा सहभागी हुन यसपटक अफ्रिकी महाद्धिप र युरोपबाट विभिन्न १५ जना फिल्मकर्मी आउँदै छन्। महोत्सवमा १४ देशका ९ फिल्म चयन भएका छन्। अफ्रिकालाई अन्य देशको नभएर अफ्रिकाकै लेन्सबाट हेरिनुपर्छ भनेर हामीले ६ वर्ष अघिबाट यो महोत्सव शुरु गरेका हौं।’
जन्जिबार फिल्म फेस्टिबलसँगको सहकार्यमा हुँदै आएको यो महोत्सवले नेपाल र अफ्रिकी मुलुकको सम्बन्ध अब सरकारी क्षेत्रबाट पनि बिस्तार र निकट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
महोत्सवमा प्रदर्शन गरिने ९ मध्ये एउटा नेपाली र बाँकी अफ्रिकी मुलुकका फिल्म हुन्। इजिप्टबाट मोहम्मद रशद निर्देशित फिल्म लिटिल इगल तथा नेपाल, तान्जानिया र भारतको जमेश गियाम्ब्रोने र रुस पारिसेओउ निर्देशित होल्डिङ अप द स्काइ महोत्सवको पहिलो दिन प्रदर्शन गरिने महोत्सवको संयोजक आलोक तिवारीले जानकारी गराए।
यस्तै मगलबार युगान्डाको एगोन्जे अर्नोल्ड निर्देशित नथिङ इज गोइन अन, अमेरिका चिलुवाको ह्वेभेस स्ट्रिटर निर्देशित सिलिकोन भ्याली, मोरोक्को फ्रान्सको फाओजी बन्साइदी निर्देशित मिली मिओस र सेनेगलको ह्वेनास प्रदर्शन हुने छ। महोत्सवको अन्तिम दिन बुधबार युगान्डाको टोची मादुवा निर्देशित फेटल डिस्टिनी, रुवान्डाको मारिई निर्देशित अ पिस फर माइसेल्फ र नेपालबाट रोशनी केसी निर्मित डा. खाते प्रदर्शन गरिने भएको छ। नेपालबाट यसपटक डा. खाते मात्र चयन भएको हो। महोत्सवमा प्राप्त ६० भन्दा बढी फिल्मबाट यी फिल्म चयन गरिएको महोत्सव संयोजक आलोक तिवारीले जानकारी गराए।
महोत्सव आयोजक तथा फिल्म चयन समितिका निर्णायक डब्बु क्षत्रीले महोत्सव युवाहरुलाई लक्षित गरिएको बताए। महोत्सवका लागि मूलधारभन्दा फरक र कलात्मक फिल्म चयन गरिएको उनको भनाइ थियो।